Most stable isotopes of ကာဗွန်
အခြားပစ္စည်းများနှင့် ရောနှော ပေါင်းစပ်လျက်ရှိသော ကာဗွန်ဒြပ်ပေါင်းများမှာ အများအပြားရှိ၏။ ကာဗွန်ဒြပ်ပေါင်း မည်မျှ များပြားသနည်းဟူမူ ဓါတုဗေဒပညာကို အင်ဩဂဲနစ် ကင်မစ္စတြီနှင့် ဩဂဲနစ် ကင်မစ္စတြီဟူ၍ နှစ်မျိုးနှစ်စားပင် ခွဲခြားထားရသည်။ ဩဂဲနစ်ကင်မစ္စတြီဆိုသည်မှာ ကာဗွန် ဒြပ်ပေါင်းများ အကြောင်းချည်း သက်သက်နှင့်သာ သက်ဆိုင် သော ဓါတုဗေဒဖြစ်၍၊ ယနေ့အထိ သိရှိထားသော ကာဗွန် ဒြပ်ပေါင်း အရေအတွက် ၃ သိန်းနီးပါးရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ကာဗွန်ပါသော ပစ္စည်းကို လေထဲတွင်ဖြစ်စေ၊ အောက်ဆီဂျင်ထဲတွင် ဖြစ်စေ၊ မီးတိုက်ပေးလိုက်လျှင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အောက်စီဂျင် လုံလုံ လောက်လောက် မရရှိသည့်အခါ ကာဗွန်မွန်အောက်ဆိုက် ဓာတ်ငွေ့ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ ကာဗွန်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်တို့ ဓာတ် ပေါင်းစပ်သောအခါ မက်သိန်းဓာတ်ငွေ့ကို၎င်း၊ ဓာတ်ဆီ ကဲ့သို့သော ဩဂဲနစ်အက်ဆစ်များနှင့် အယ်လကိုဟောကဲ့သို့ သော ဟိုက်ဒရို ကာဗွန်ဒြပ်ပေါင်းများကို၎င်း ရရှိသည်။ အောက်စီဂျင်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင် နှစ်မျိုးလုံးနှင့် ဓာတ်ပေါင်းစပ်သော အခါတွင် အက်ဆီတစ်အက်ဆစ် ကဲ့သို့သော ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ဒြပ်ပေါင်းများကို ရရှိသည်။ ကာဗွန်သည် သတ္တုများနှင့်လည်း ပေါင်းစပ်နိုင်ရာ ထိုဒြဗ်ပေါင်းများကို ကာဗိုက်ဟုခေါ်၏။ အထင်ရှားဆုံးသော ကာဗိုက်မှာ ကယ်ဆီယမ်ကာဗိုက် ဖြစ်၏။ ကယ်ဆီယမ်ကာဗိုက် အပေါ်တွင် ရေအနည်းငယ် လောင်းချ လိုက်လျှင် အဆက်တီလင် ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ ကာဗွန် သည် သက်ရှိရာများတွင် အရေးကြီးသော ဓာတ်ဖက် ပစ္စည်း တစ်ခုအဖြစ် ပါရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
Lide, D. R., ed. (2005)။ CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.)။ Boca Raton (FL): CRC Press။ ISBN 0-8493-0486-5။
Haaland, D (1976). "Graphite-liquid-vapor triple point pressure and the density of liquid carbon". Carbon 14 (6): 357. doi:10.1016/0008-6223(76)90010-5.
Savvatimskiy, A (2005). "Measurements of the melting point of graphite and the properties of liquid carbon (a review for 1963–2003)". Carbon 43 (6): 1115. doi:10.1016/j.carbon.2004.12.027.
Fourier Transform Spectroscopy of the System of CP။ 2007-12-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Fourier Transform Spectroscopy of the Electronic Transition of the Jet-Cooled CCI Free Radical။ 2007-12-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Carbon: Binary compounds။ 2007-12-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Material Properties- Misc Materials။ 12 November 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
History of Carbon and Carbon Materials - Center for Applied Energy Research - University of Kentucky။ Caer.uky.edu။ 2008-09-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Senese, Fred (2000-09-09)။ Who discovered carbon?။ Frostburg State University။ 2007-11-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။